Dutchtown ရှိအရင်းအမြစ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အဆက်အသွယ်များ• DutchtownSTL.org
ဒိန်းမတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုသင့်အားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် St. Louis ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဌာနများအကြောင်းနှင့် Dutchtown တွင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်သူများအတွက်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အရင်းအမြစ်များကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပုံ၊ ပြissuesနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်၊ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသောအရာရှိများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများအားလေ့လာပါ။
DutchtownSTL.org ကိုစပိန်၊ ဗီယက်နမ်၊ အာရဗီ၊ နီပေါနှင့်အခြားဘာသာစကားများစွာဖြင့်ယခုရရှိနိုင်သည်။ ဘာသာပြန်ခြင်းကိုစတင်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ.
မြို့ဝန်ဆောင်မှုများ - နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရို
အဆိုပါ နိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဌာနCSB) St.Louis ၏မြို့တော်သန့်ရှင်းရေးရုံးကိုနေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စများအတွက်အသုံးပြုသည်။ စိန့်လူးဝစ္စတွင်အရေးပေါ်မဟုတ်သောပြissueနာရှိပါကသင်၏ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုသည် CSB ဖြစ်သင့်သည်။ အောက်ပါပြissuesနာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပြissuesနာများအတွက် CSB ကိုခေါ်ပါ။
CSB ကို (314) 622-4800, အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် csb@stlouis-mo.gov, CSB ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါဒါမှမဟုတ် @stlcsb မှာ tweet ပြanနာတစ်ခုသတင်းပို့သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုရန်။
မြို့ပြ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာအများစုကို CSB ကကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုတိုက်ရိုက်မကူညီနိုင်သောအခါသူတို့သည်မေးမြန်းရန်သင့်တော်သောဌာနကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ သံသယဖြစ်လျှင်, နိုင်ငံသားများ '' ဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုနှင့်စတင်ပါ။
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြIssနာများ - အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ
အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု ပိုမိုပြင်းထန်သောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်သည့်အခါနေထိုင်သူများနှင့်မြို့ဝန်ဆောင်မှုများအကြားဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု (လူသိများသည်။ ) NISs, NSOs, သို့မဟုတ် Neighborhood Stabilization Officers) သည်စိန့်လူးဝစ္စရဲဌာန၏ပြPropertiesနာဆိုင်ရာပစ္စည်းယူနစ်နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်နေပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာများကိုလျော့ပါးစေခြင်း၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်အရာရှိများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ပြassignedနာများကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားသော၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်များသို့ခရီးသွားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ NISဤအရေးအသား၏အဖြစ် s ကို Dutchtown areaရိယာတွင်သတ်မှတ်ထားသည်
ရပ်ကွက်9& ရပ်ကွက် 20 NIS Barb Potts
PottsB@stlouis-mo.gov • (၃၁၄) ၆၅၇-၁၃၇၀
ရပ်ကွက် 11 & ရပ်ကွက် 13 NIS Kathryn Woodard
WoodardK@stlouis-mo.gov • (၃၁၄) ၆၅၇-၁၃၇၀
ရပ်ကွက် ၈ NIS ခရစ်ယာန် Saller
SallerC@stlouis-mo.gov • (၃၁၄) ၆၅၇-၁၃၇၀
အဆိုပါ စိန့်လူးဝစ်မြို့တော်ရဲဌာန'' ပထမနှင့်တတိယခရိုင်များသည် Dutchtown areaရိယာတွင်ဖြစ်သည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်သည့်အတွက် 911 သို့မဟုတ် (314) 231-1212 သို့ခေါ်ဆိုပါ။ သံသယဖြစ်ပါက ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိတ်အညစ်များကိုသတင်းပို့ရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပစ္စည်း၏မှန်ကန်သောလိပ်စာကိုအသုံးပြုရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ NISs နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်နေထိုင်သူများဆန့်ကျင်အမှုများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပြProbleနာ Properties ကိုယူနစ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပြီးပါပြီ Dutchtown ရှိရဲဝန်ဆောင်မှုများကိုမည်သူ၊။ ရဲများနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်သင်နေထိုင်သည်နှင့်သင်၏ဒေသခံတပ်မှူးမှာမည်သူဖြစ်သည်၊ အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်သောကိစ္စများတွင်မည်သူဆက်သွယ်ရမည်နှင့်ပိုမိုသောအရာများပိုမိုလေ့လာပါ။
ယေဘူယျမေးခွန်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် 911 သို့မဟုတ် 314-533-3406 ကိုခေါ်ပါ။ အကယ်၍ မီးခိုးရှာဖွေစက်ကိုသင်တောင်းဆိုရန်လိုအပ်ပါကယေဘုယျလိုင်းကိုခေါ်ပါ။ အရေးပေါ်နည်းသောမီးဘေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများအား (၃၁၄) ၆၂၂-၄၀၀၈ ရှိပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုသို့အစီရင်ခံနိုင်သည်။
အဆိုပါ ကုသခြင်းအကြမ်းဖက်မှုအစီအစဉ်ကစီမံခန့်ခွဲသည် အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှုမကြာသေးမီက Dutchtown ရောက်ရှိခဲ့သည် Cure Violence သည်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းသို့ချဉ်းကပ်သည်။ သူတို့၏လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူများသည်ထပ်မံမဆိုးရွားမီအန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်တတ်ကြသည်။ ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း၊ ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်အခြားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် 314-333-3604 ကိုခေါ်ပါ။
လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုများ 24/7 အကျပ်အတည်းလိုင်း
Provident အကြံပေးခြင်း 24/7 အကျပ်အတည်းလိုင်း
အသက် ၂၁ နှစ်အောက်ကလေးများ
ALIVE - အကြမ်းဖက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ရန်အခြားနည်းလမ်းများ
အမြိုးသမီးမြား Safe House
စိန့်လူးဝစ် Queer + ပံ့ပိုးမှု Helpline
Dutchtown businessesရိယာရှိအဖွဲ့အစည်းများသည်နေထိုင်သူများကိုအတူတကွစုစည်းရန်၊ ထိုဒေသရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရန်နှင့်ရပ်ကွက်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
အလည်အပတ် dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး တစ်ဦးကိုရှာဖွေ အရင်းအမြစ်များစာရင်း အထူးသဖြင့် Dutchtown နှင့် St. Louis မြို့တော်တစ်လျှောက်ရှိအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦး တည်။ အထူးစီမံထားသည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်လည်ပတ်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအစိုးရအဆက်အသွယ်များကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ ငါတို့လည်းအသုံးဝင်တယ် လမ်းလျှောက်လမ်းပြလမ်းညွှန်များ သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုပြသရန်။
သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း လူကြီးများအတွက် ပညာရေးအရင်းအမြစ်များ. အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ HiSET (GED) အတန်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်မှု အတန်းများနှင့် အခြေခံကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများဖြစ်သည်။
လူငယ်အတွက် Thomas Dunn က စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ နေရာMarquette Park Recreation Center တွင် ရှိသော ဆယ်ကျော်သက် စင်တာတစ်ခု။ အသက် 13 နှစ်မှ 21 နှစ်ကြား လူငယ်များသည် အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် ဂိမ်းများ၊ အင်တာနက်နှင့် စာအုပ်များဖြင့် အနားယူရန် ညနေ4နာရီမှ7နာရီအထိ လာရောက်နိုင်သည်။ အဆိုပါနေရာသည် အစားအသောက်များနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သရေစာများအပြင် အဝတ်လျှော်စက်နှင့် အခြောက်ခံစက်ကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
Greater Dutchtown ဧရိယာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ စိန့်လူးဝစ်ပြည်သူ့ကျောင်းများ. မူလတန်းကျောင်း အစရှိတဲ့ ရပ်ကွက်ကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Meramec မူလတန်း, Froebel စာတတ်မြောက်ရေးအကယ်ဒမီ, မွန်ရိုးမူလတန်းနှင့် Woodward မူလတန်း. အနာဂတ် Carnahan အထက်တန်းကျောင်း Dutchtown မှာလည်း တည်ရှိပါတယ်။ စိန့်လူးဝစ်အစိုးရကျောင်းများသည် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အစားထိုးလမ်းကြောင်းကျောင်းများစွာကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စာရင်းသွင်းအချက်အလက်ကို ဤနေရာတွင် ရှာပါ။.
ရပ်ကွက်အတွင်း အပါအဝင် စင်းလုံးငှားကျောင်း ရွေးချယ်မှုများလည်း ပေးထားသည်။ မြစ်ဆုံ တောင်မြို့ အကယ်ဒမီ, Eagle ကောလိပ်ပြင်ဆင်မှု, Kairos အကယ်ဒမီများနှင့် KIPP Wonder Academy.
ထို့အပြင် Dutchtown တွင်ရှိသောပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအပါအဝင်ဘာသာရေးကျောင်းများလည်းရှိသည်။ စိန့်မာရိရဲ့အထက်တန်းကျောင်း ယောက်ျားလေးတွေအတွက်၊ စိန့်စီစီလီယာ အကယ်ဒမီစပိန်စကားပြော ကျောင်းသားများကို အဓိက ဝန်ဆောင်မှုပေးသော၊
သင်တစ် ဦး ကျယ်ပြန့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Dutchtown နှင့် South Side တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်အရာရှိများစာရင်း ပြည့်စုံသောအဆက်အသွယ်အချက်အလက်နှင့်နောက်ခံနှင့်အတူ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမြန်လင့်ခ်အချို့ရှိပါသည်။
ရပ်ကွက် 25 Alderman Shane Cohn
CohnS@stlouis-mo.gov • (၃၁၄) ၆၅၇-၁၃၇၀
ရပ်ကွက် 20 Alderwoman Cara Spencer
ရပ်ကွက်9Alderman ဒန် Guenther
GuentherD@stlouis-mo.gov • (၃၁၄) ၆၅၇-၁၃၇၀
ရပ်ကွက် 13 Alderwoman ဗက် Murphy
MurphyB@stlouis-mo.gov • (၃၁၄) ၆၅၇-၁၃၇၀
ရပ်ကွက် 11 Alderwoman စာရာမာတင်
MartinS@stlouis-mo.gov • (၃၁၄) ၆၅၇-၁၃၇၀
သင်မည်သည့်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သည်ကိုမသေချာပါ။ သင့်လိပ်စာကိုကြည့်ပါ စီးတီးရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
ခရိုင် 81 ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်။ စတိဗ် Butz: Dutchtown ၏အများစုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်
ခရိုင် 80 ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်။ ပတေရုသ Meredith: Dutchtown ၏အနောက်မြောက်အဘို့ကိုထမ်းဆောင်
ခရိုင် 78 ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်။ Rasheen Aldridge: Dutchtown ၏အရှေ့မြောက်အဘို့ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်
ကွန်ဂရက်စ်အမျိုးသမီး Cori Bush
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Josh Hawley
အသုံးဝင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ
ငွေတောင်းခံ: (314) 622-4179
ပွင့်လင်းဓါတ်ပေါင်းဖိုသို့မဟုတ်ရေစီး: (314) 771-4880
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု: (314) 771-2255
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု (CSB): (314) 622-4800
Ameren Missouri (လျှပ်စစ်)
ငွေတောင်းခံ: (866) 268-3729
downed ပါဝါလိုင်းများ: (800) 552-7583
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု: (800) 552-7583
Spire စွမ်းအင် (သဘာဝဓာတ်ငွေ့)
ငွေတောင်းခံ: (800) 887-4173
911 သို့မဟုတ် (800) 887-4173: ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုသတင်းပို့ပါ
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု: (800) 887-4173
ငွေတောင်းခံ: (866) 281-5737
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု: (314) 768-6260
ရပ်ကွက်နှင့်မြို့အရင်းအမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်မှပျောက်နေပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ ပြီးတော့သင်လိုအပ်တာကိုရှာပြီးဒီမှာစာရင်းထဲထည့်ပေးဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါမယ်။
ဒိန်းမတ် Dutchtown အိမ်နီးချင်းအရင်းအမြစ်များ